Taxanaha ugu wanaagsan ee FB seddex waji nadiifiyaha ah ee nadiifinta faakiyuumka loogu talagalay soosaaraha warshadaha culus iyo soosaarka | Marcospa
Taxanaha FB saddex waji nadiifiye ah oo nadiifiyaha nadiifiyaha ah ee warshadaha waajibaadka culus
Muuqaalka ayaa ah mid ka badbaado badan isla markaana aan caddeyn karin waxyaabaha qarxa, ka fudud kana qaalisan kuwa kale ee nadiifinta faakiyuumka warshadaha culus. Waxay ku habboon tahay hawlgalka joogtada ah ee aagagga aan qarxa laga ilaalin karin iyo boodhka ololi kara iyo waxyaabaha qarxa ama qalabka warshadaha. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay wax soo saarka birta, wax soo saarka xaashida balaastigga ah, batteriga, ridaya, korantada, daabacaadda 3D iyo warshadaha kale.
Sharaxaadda taxanahan FB ee saddexda waji ah ee nadiifiyaha Vacuum-caddayn ah
Halbeegyada taxanahan ugu wanaagsan ee FB ee saddexda waji ah ee iibka nadiifinta Vacuum-caddaynta ah
1. Matoor aan qarxin karin, ka hortag dhimbiil koronto
Nidaamka awooddu wuxuu qaataa marawaxadaha marawaxadaha tuubada saxda ah ee caalamiga ah ee qarxa-caddeynta ah (bamka hawada), bareeg laba-laab ah oo ballaadhan, kalsooni sare, buuq hooseeya, nolol dheer iyo hawlgal joogto ah muddo 24 saacadood ah. Awooda waxaa lagahelaa 0.25kw ilaa 4.0kw, korontada waa 380V / 50Hz.
fasalka mashiinka waxyaabaha qarxa ku xiran: Ex d Ⅱ BT4 Gb
2. Filter-ka-hortagga ma guurtada ah si looga hortago khataraha dhimbiil ee ma guurtada ah
Bacda xiddiga ee ikhtiyaariga ah iyo miiraha kaydadka ee nidaamyada sifeynta.
Shaandhada boorsada xiddigtu waxay isticmaashaa dareemo isku dhafan oo antistatic ah si kor loogu qaado waxqabadka iyadoo lagu darayo fiilooyinka binary.
Miiraha kaydadka miiraha waxaa lagu daaweeyaa aluminized dusha sare, oo leh waxqabadka antistatic wanaagsan iyo caabbinta dusha sare ≤105Ω.
3. Sanduuqa korontada ee aan qarxin karin si looga hortago khataraha dhimbiil ee korantada
Nidaamka kontoroolka wuxuu qaataa sanduuqa korantada ee qarxa-caddeyn la'aanta ah, xiriiriyaha gudaha ee AC iyo kuleylka xad dhaafka ah wuxuu isticmaalaa qaybaha korantada Schneider.
sanduuqa korantada ee qarxa-qarxa, calaamadda qarxa-caddeyn: Ex d II BT4
4. Kormeerka cadaadiska xun, xusuusinta nadiifinta
Qiyaasta cadaadiska xun waa qaybta qaabeynta qaabeynta ee mashiinka oo dhan. Waxaa si gaar ah loogu talagalay nadiifinta faakiyuumka warshadaha by Puhua. Cagaarka, buluuga iyo casaanka siday u kala horreeyaan waxay u dhigmaan cadaadiska gudaha ee mashiinka qayb kasta oo awood ah. Tilmaamuhu wuxuu tilmaamayaa aagga cas si uu u matalo shaandhada ayaa u baahan in la nadiifiyo ama la beddelo.
5. Qasabadaha warshadaha, fududahay in la dhaqaajiyo qashinka Warshadaha waa fududahay in la rakibo.
Shaagaggan ayaa ka samaysan polyurethane-darajo sare ah (PU), qaansooyinku waxay ka samaysan yihiin saxanbo xardhan oo 2.5mm ah si feeraha loo kordhiyo, labada daaradoodna 2-inji waxay qaadi karaan 50kg shaqsi ahaan. Dusha sare ee gawaarida waxaa loogu talagalay hadhuudh si kor loogu qaado waxqabadka anti-silbashada.
6 - Kala saar foostooyinka sare iyo kuwa hoose, si sahlan oo loo nadiifiyo Qaab-dhismeedka kala-soocida foostada sare iyo tan hoose waa qaabeynta qaabeynta mashiinka, taasoo keenta raaxada ugu weyn ee isticmaaleha. Way ku habboon tahay in la nadiifiyo boodhka. Marka ay lagama maarmaan tahay in la nadiifiyo boodhka, oo kaliya loo baahan yahay in kor loo qaado baarka cadaadiska, foosto ururinta foosto si dabiici ah ayay ugu dhacdaa dhulka, oo foostana u dhaqaajisaa., Boodhka iska daadisaa, oo cadaadisaa baarka cadaadiska ka dib markaad dhamayso.
7. Duufaan gudaha ku jirta si loo yareeyo culeyska miiraha Qaab-dhismeedka duufaanka gudaha waa qaabeynta mishiinka. Waxaa lagu rakibay isku xidhka dekedda nuugista. Qaybo waaweyn ayaa si toos ah loogu dejin karaa hoosta boodhka ururinta baaldiga iyada oo loo marayo kala-sooca duufaanka. Uma baahna in la dhexgalo oo lagu xayiro shaandhada, taas oo kordhin karta nolosha shaandhada.
8. Isku-xidhka ka-hortagga iyo tubbada Tuubbada iyo isku xiraha waxay ka samaysan yihiin walxo ka hortagga ma guurtada ah, korantada ku shaqeysa waxay waafaqsan tahay DIN53482, dusha sarena waa <106Ω.
9. Shaandhayuhu wuxuu korsadaa gacanta si uu u nadiifiyo siigada, taas oo ku habboon oo wax ku ool ah. Nadiifinta boodhka wareega waxay qaadataa habka gacanta. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad wareejiso wareegga wareegga saacad / saacad gees u wareegsan illaa 1 daqiiqo si aad u nadiifiso walxaha waaweyn ee boodhka ee ku dhajisan dusha miiraha.
Awooda （Kw） 2.2 4
Danab （V / Hz） 380/50 ~ 60
Hawada （m3 / h） 265 318
Vacuum （mbar） 240 290
Mugga haanta （L） 60
Buuq dB （A） 72 ± 2 74 ± 2
Dhexroorka neefta （mm） 50
Aagga miiraha （m2） 3.5
Awoodda shaandhada Sifeeyaha ka-hortagga （0.3μm ＞ 99.5%）
Nadiifi shaandhada gacanta isku shaandheyn
Aragti （mm） 1220 * 565 * 1270
Miisaanka （kg） 105 135
Hore: A9 taxane faakiyuum soosaara boodhka warshadaha Waajibka culus sedex waji nadiifiyaal wasakhda warshadaha
Xiga: Taxane P3 batari ku shaqeeya tamarta faakiyuum nadiifiyaha
Model kala duwan Workshop Mashiinka SEPARATOR Pre ma ...
Batari taxane P3 ku shaqeeya koronto la'aan warshadaha v ...